ဒီဟာကိုဖတ် VIP အတွက်
ဒီဟာကိုဖတ် VIP အတွက် >
နာမည်စိမ်းနေတာဟာ ဒီဆိုက်မှာ မန်ဘာဖြစ်ပြီလို့ သတ်မှတ်ထားသူပါ။
နာမည်မစိမ်းသေးရင် ဒီလင့်ကိုကလစ်ပြီး စာပို့ခိုင်းပါ။ ပြီးရင်မေးလ်ထဲကို စာတစ်စောင်ရောက်လာမယ်ကလစ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် နာမည်စိမ်းပါပြီ။.
ပေါက်ကရမေးလ်တွေနဲ့ လီးလီးလားလားတွေ ဖွင့်ထားရင်တော့ စိမ်းမှာ မဟုတ်ပါ
တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလို့ ရပြီဗျိုးးးးးးးးးးးးးးးးး ဒန်တန့်တန်....
ဒါပေမဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ခင်ဗျားတို့ မြင်နေရပါဦးမယ်။ ကြော်ငြာတွေက ခင်ဗျားတို့ကို ဒစ်လည်စေပါဦးမယ်
VIP ဝယ် ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ အဆင်ပြေမယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဆေးဖိုးရမယ်။ အဟမ်း
နာမည်ဝါသွားရင်တော့ VIP ပေါ့ တစ်လ ငါးထောင်ကျတယ်ဗျား.။.. yahoo
နာမည်ဝါသွားရင်တော့ VIP ဖြစ်သွားပြီလေ။ ၁၆ ၁၇ ဇတ်ကားတွေ အများကြီးကြည့်လို့ ရပြီ။ အပြင်မှာ ထားရင် ဆောက်ဇယားနောက်တဲ့ကားတွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဆောက်သက်ငယ်တာတွေလာတောင်းရင် လိုးလွှတ်ပါတယ်.. အားမပေးသလို တောင်းရင်လည်း ဘန်းပါတယ်။ နမူနာတွေကို ဆိုက်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ် ဘွတ်လွှတ်တာပါ။ ကလေးကားကြည့်ချင်လို့ လာတာဆိုရင်တော့ ဒီကိုမလာပါနဲ့ ..။ စကားပြားချပ်ချပ်
နာမည်ဝါသွားရင်တော့ဇတ်ကားတွေပါ တောင်းလို့ရပြီလေ။ ဘယ်လိုကားတွေတောင်းချင်သလဲ တောင်းလို့ရပြီ။ rapid gator တို့လို wdupload တို့လို ပိုက်ဆံပေးပြီး ပရီမီယမ် အကောင့်ဝယ်ထားမှ ဒေါင်းလို့ရတဲ့ဆိုက်တွေပေါ့။ တစ်လကို us 30 ပေးမှ ဒေါင်းလို့ရတဲ့ကားတွေကို ကျွန်တော်တို့က ဖရီးဒေါင်းပေးတယ်။ VIP သမားတွေအတွက်ပေါ့... နောက်ထပ် ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ မြန်မာကားတွေ အပြင်မှာ တင်ထားတာ ထောင်သောင်းချီတယ်နော်။ ဟုတ်တယ်။ တစ်ခြားဆိုက်ကနေပြီးတော့ မ ထားတဲ့ဟာတွေလည်း အထဲမှာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စည်းကို တစ်ဆင့် ထပ်ခံပေးထားပါတယ်။ မကျော်ပါ။ ဘယ်သူမှ မခွနိုင်အောင် အထဲမှာပဲ သီးသန့်ရှယ်ပါတယ်။ ဒီတော့ စိတ်ချရတယ်.ကားတွေလည်း အပြင်မရော်ကဘူးပေါ့
ကြော်ငြာတွေလည်းကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးလေ။ VIP ဖြစ်ပြီဆိုရင် တိုက်ရိုက်လည်း ဒေါင်းလို့ရသွားပြီလေ။ ဘာရသေးလဲဆိုတော့ LINE VIP ထပ်ရတယ်။ မရခံနိုင်ရိုးလား ငါးထောင်ရင်းထားရတာကိုး အင်းး
line vipမှာ တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။ ဒီမှာ မရှိတဲ့ကားတွေ ဟိုမှာ ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ LINE VIP က ဒီဆိုက်မှာ တင်တဲ့မြန်မာကားတွေကို တင်ပေးတာပဲ တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်ဒေါင်းနိုင်စေဖို့အတွက်။ ဘာတွေပိုလာလို့ LINE VIP ကို ဖွင့်ရတာလဲ .. ရှင်းပါတယ်။ မန်ဘာတွေရှယ်ချင်တဲ့ကားတွေပုံတွေ အောက်စလွတ်တာ ချက်တင်တွေကို အဲ့မှာ တင်ချင်လို့ဗျာ အပြင်မှာမထားချင်လို့. နောက်ပြီးတော့ ထိုင်း မလေး အင်ဒို LINE VIP တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဝယ်ထားတော့ forward လုပ်ပေးလို့ရအောင် LINE VIP ဖွင့်တာပဲ။ အဲ့ဆိုက်တွေမှာ တစ်လကို မြန်မာငွေ ၂သောင်းကျော်ပေးရတဲ့ ကားတွေရှိတော့ ကျွန်တော်တို့ ဝယ်တယ် ပြန်ရှယ်တယ်။ မှတ်ထားပါ။ ဘရိုတို့ ရင်းထားတာ ငါးထောင်တည်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီထက်မက ပေးထားပါတယ်။ မသေချာရင် တွေ့တဲ့ နာမည်ဝါနေတဲ့ တစ်ယောက်ကို စာပို့ဗျာ ဖြေလိမ့်မယ်။ နက်ဖလစ် သိတယ်မဟုတ်လား ဇတ်ကားတွေကြည့်လို့ရတယ်။ တစ်လကို တစ်သောင်းခွဲတန်တယ်။ အဲ့အကောင့်တွေကို ခင်ဗျားတို့ရတယ်။ VIP သမားတွေ ကြည့်လို့ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ စပူတီဖိုင်း သိတယ်ဟုတ် သီချင်းတွေ နားထောင်လို့ရတယ်။ vip ရတယ်ဗျား။ အဲ့လို အကောင့်တွေ ရှိတယ်။ Pornhub hulu အစုံဗျာ ပြောနေရင် ရှည်မယ်။ အင်္ဂလိပ်လို မရေးတာကောင်းတယ်။ မြန်မာလိုရေးတော့လည်း အသံထွက်မကောင်း ဘာလားဟ
ရှာဖတ်ဗျာ vip အကြောင်းရေးရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး ရေးထားတာတွေ လိုက်ဖတ်...။
VIP ELITE ပါလားဟေ့
နာမည်စိမ်းတွေ နာမည်ဝါတွေရဲ့ အထက်မှာ ရှိပါတယ်။ နာမည်ငွေရောင်သမ်းပြီး သရဖူ ဘေးမှာရှိနေတာက VIP ELITE ပါ . ဘာတွေလုပ်လို့ရသလဲ
အပေါ်က နှစ်ယောက်လုပ်လို့ရတာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာတွေကို အကုန်လုပ်လို့ရတဲ့အပြင် အဲ့နှစ်ယောက် ကို ပေးဖို့ စိတ်မချရတဲ့ အကောင့်တွေကို VIP ELITE သမားတွေက ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
တောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း နေထုတ်လှမ်းစရာမလိုလောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ VIP သမားတွေက ဆိုက်ကြီးတွေကို တောင်းလို့မရပါဘူး။ သူတို့တောင်းရင် ဂစ်နှစ်ဆယ်အထိပဲတောင်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ VIP ELITE သမားတွေက VIP ELITE SECTION ထဲမှာ တောင်းရင် ဂစ် ၂၀၀ ထိတောင်းခွင့်ရှိပါတယ်။ သူတို့အတွက် rdp တစ်လုံးသီးသန့်ဝယ်ပေးထားပါတယ်။ တစ်လကို9USD ကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ RDP က ၂၅GB ပဲ ရှိတော့ MEGA အကောင့်ထဲကို သွားပါတယ်။ MEGA LIMITED ဖြစ်သွားရင် ဟိုစတင်ဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါတယ်။ ဒီတော့ အေးဆေးတောင်းနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက VIP ELITE ထဲမှာ တစ်ခြားသူတွေ မသိစေချင်တဲ့ ပုံလေးတွေ ကားလေးတွေကို ထားပါတယ်။ အကောင့်တွေကိုထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးအသစ်တစ်ခု ရထားတာ ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါက တိုက်ရိုက်ဒေါင်းဖို့အကောင့်ပါ။ LEECH360 မှာ ဝယ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ VIP ELITE သမားတွေသုံးဖို့အတွက် သီးသန့် ဆောက်ပေးနေပါတယ်။
ဘယ်လောက်ကျသလဲဆိုရင် အစိမ်းကတော့ ဖရီး အဝါကတော့ တစ်လ ငါးထောင် .... VIP ELITE တော့ သုံးလတစ်သောင်းခွဲပါ။ တစ်လ ငါးထောင်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူက တစ်ခါတည်းနဲ့ သုံးလစာဝယ်လို့ အပေါ်ကို ပင့်ပေးလိုက်တာပါ။ ရော့ဟ
မသိတာတွေရှိရင် မေးနိုင်တယ်။ ဖြေ ပေးမယ်။ ဒီအောက်မှာ စာရေးပါ။ စာပြန်ပေးပါမယ်။
vip ဖွဈခငျြရငျ [email protected] ကို MPT OOREDOO ငါးထောငျတနျ တဈကတျ ပို့လိုကျပါ။ ဒီအောကျကပုံ ကိုကလဈပွီးတော့လညျး ပို့နိုငျပါတယျ။
Current time: 11-19-2019, 06:16 AM Powered By MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.